10 युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर फव्वारा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर फव्वारा
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा हंगेरी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, यात्रा युरोप
(Last Updated On: 07/08/2021)
युरोपमा धेरै अद्भुत र सुन्दर स्थलहरू छन्. प्रत्येक कुनामा पछाडि, त्यहाँ भ्रमण गर्न स्मारक वा बगैंचा छ. सब भन्दा रमाईलो र उल्लेखनीय दृश्य मध्ये एक एक शानदार फव्वारा हो, र हामीसँग हात छान्नु छ 10 युरोप मा सबै भन्दा सुन्दर झरना को.
सा .्गीतिक, असाधारण, युरोपका झरनाहरू दर्शनीय छन्. पेरिसबाट बुडापेस्ट, सहरको बीचमा वा टापुमा, यी 10 अचम्मका फोहरीहरू भेट्न लायकको छ.
1. रोममा ट्रेवी फाउंटेन
रोमको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा प्रख्यात फव्वारा ट्रेवी फव्वारा हो. यो भव्य फोहरा फोहोरको बारेमा 2,824,800 प्रत्येक दिन घन फिट पानी. पनि, रोमन समयमा यो केन्द्रीय जल स्रोत थियो. यसरी, तपाईले देख्नुहुनेछ कि तीन सडक "ट्रे भि" को चौबाटोमा ट्रेवी फव्वारा तीन सडक फव्वारा.
यदि तपाईंलाई थाहा भएन, ट्रेवी फव्वारा युरोपको सात आश्चर्य मध्ये एक हो. त्यसैले, यो आश्चर्यजनक होइन कि युरोपको सब भन्दा सुन्दर झरनामा धेरै चलचित्रहरू छन, जस्तै रोमन हलिडे.
रोममा जहाँ ट्रेवी फव्वारा छ?
लुभावनी ट्रेवी फव्वारा स्पेनिश चरणहरूबाट केवल १० मिनेटको पैदल दूरीमा छ. तपाईं बर्बरिनी स्टेशनमा ट्राम पनि लिन सक्नुहुनेछ.
मिलान रोम ट्रेन मूल्यहरु
फ्लोरेन्स रोम रेल मूल्यहरु
पिसादेखि रोम ट्रेन मूल्य
नेपल्स रोम रोम मूल्यहरु
2. ट्रोकाडेरो फाउंटेन
ट्रोकाडेरो फाउंटेनको सबैभन्दा उल्लेखनीय विशेषता भनेको केन्द्रको वारसाको फव्वारा हो. यो बेसिन-आकारको छ, संग 12 यसको चारैतिर फोहराहरू. त्यसैले, एफिल टावर र झरना को दृश्य बिल्कुल महाकाव्य छ.
को सुन्दर बगैंचा र झरनाहरू सुरुमा ट्रोकाडेरो पालिसको अंश हुन्, तिनीहरू भित्र सिर्जना गरिएको थियो 1878 विश्वव्यापी प्रदर्शन संग. सीन नदीको सामना गर्दै, पृष्ठभूमि Palais du Chaillot मा, र एफिल टावर को अगाडि, ट्रोकाडेरो फव्वारा हो पेरिस मा सही पिकनिक स्थान, र युरोप.
ट्रोकाडेरोमा कसरी पुग्ने?
तपाइँ Trocadero को बगैंचा र मेट्रो द्वारा फव्वारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रोकाडेरो स्टेशनमा.
एम्स्टर्डम पेरिस ट्रेन मूल्यहरु
लन्डन देखि पेरिस ट्रेन मूल्यहरु
रोटरडम पेरिस ट्रेन मूल्यहरु
ब्रसेल्स पेरिस ट्रेन मूल्यहरु
3. वर्साइलमा ल्याटोना फाउन्टेन
छन् 55 को बगैचाहरु मा फोहरा versailles, तर सब भन्दा सुन्दर र उल्लेखनीय ल्याटोन फोहाना हो. ला लाटोना फाउंटेन ओविडको मेटामोर्फोजबाट प्रेरित थियो, अपोलो र डायनाको लाटोना आमा, यस गौरवमय फवारामा उनको बच्चाहरु संग चित्रित.
ठूलो नहरको सामना गर्दै, तपाइँ सजीलै भेट्टाउन सक्नुहुन्छ र राजा लुइस चौधौंको दर्शन देख्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै ठाउँबाट पनि. उच्च सीजनको दौरान तपाईं फव्वारा म्युजिकल शोको मजा लिन सक्नुहुनेछ जुन ठाउँ लिन्छ3हप्तामा एक पटक.
ल्याटोना कसरी पुग्ने?
भर्साइल दरबार वर्सेल्स शहरमा अवस्थित छ, बस 45 पेरिसबाट रेलमा केही मिनेट. तपाईं ट्रेनलाई Versailles Chateau Rive Gauche स्टेशन गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसोभए यो स्टेशनबाट महल र बगैचाको लागि केही हिड्ने दूरी हो.
ला रोशेल नान्ट्स ट्रेन मूल्यहरु
टुलूज ला ला रोशेल ट्रेन मूल्यहरू
बोर्डो मा ला रोशेल ट्रेन मूल्यहरु
पेरिस गर्न ला रोशेल ट्रेन मूल्यहरू
4. इफ्टेलि F फाउंटेन
युरोपको सबैभन्दा प्रभावशाली म्युजिकल फाउंटेन शो ईफटेलि theme थिम पार्कमा रहेको म्युजिकल फाउंटेन शो हो. तपाईं द्वारा चकित हुनुहुनेछ 12 मिनेट प्रकाश र पानी शो, जहाँ भ्यागुताहरूले पानीलाई सुन्दर ब्याले शोमा रूपान्तरण गर्दछ.
अकुनुरा फाउंटेन प्रणाली Efteling को लागि निर्माण गरिएको थियो 60 वार्षिकोत्सव. निष्कर्षमा पुग्न गर्न, सांगीतिक कार्यक्रम अद्भुत को लागि एक परिवार यात्रा को एक महान अन्त हो Efteling थिम पार्क.
Efteling फव्वारा कसरी पुग्ने?
यो आश्चर्यजनक पार्क एम्स्टर्डमबाट केवल एक घण्टाको दूरीमा छ, त्यसैले यो रमाईलो परिवारको लागि उत्तम छ एम्स्टर्डम बाट दिन यात्रा.
ब्रसेल्स एम्स्टर्डम ट्रेन मूल्यहरु
लन्डन एम्स्टर्डम ट्रेन मूल्यहरु
बर्लिन देखि एम्स्टर्डम ट्रेन मूल्यहरु
पेरिस देखि एम्स्टर्डम ट्रेन मूल्यहरु
5. 1o युरोपमा सब भन्दा सुन्दर झरनाहरू: ट्राफलगर फाउंटेन
Mermaids र Tritons ट्राफलगर स्क्वायर फाउंटेनमा केन्द्रीय मूर्ति हो. तथापि, अन्य झरना जस्तो छैन, यी समुद्री जीवहरूको छनौट पछाडि कुनै पौराणिक कथा छैन. लन्डनमा सब भन्दा सुन्दर झरना मूल रूपमा निर्माण गरिएको थियो 1841 प्रदर्शनकर्ताहरूको लागि ठाउँ न्यूनतम गर्न.
तपाईंले ट्राफल्गर स्क्वायर फाउन्टेन्ट लन्डनमा ठीक राष्ट्रिय ग्यालरीको अगाडि पाउनुहुनेछ. साथै, तपाइँलाई थाहा हुनुपर्दछ कि लन्डनवासीहरू त्यहाँ क्रिसमस रमाईलोको लागि आएका हुन्. त्यसैले, तपाईंसँग युरोपमा सबैभन्दा सुन्दर झरनाहरू भेट्न अर्को ठूलो कारण छ.
लन्डनमा ट्राफल्गर फोउन्टेनमा कसरी पुग्ने?
तपाईं लन्डनको कुनै पनि स्थानबाट चेरि Cross क्रस ट्यूब स्टेशनको यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ.
एम्स्टर्डम लन्डन ट्रेन मूल्यहरु
पेरिस गर्न लन्डन ट्रेन मूल्यहरू
बर्लिनदेखि लन्डन ट्रेन मूल्यहरू
ब्रसेल्स लन्डन ट्रेन मूल्यहरु
6. ईन्स्ब्रकमा स्वारोभस्की फाउंटेन
टायरोल क्षेत्र अष्ट्रियाको एक सुन्दर क्षेत्र हो, साथै स्वारोवस्की मुख्यालयको घर. स्वारोभस्की फव्वारा स्वारोभस्की क्रिस्टल वर्ल्डमा अवस्थित छ, मनोरञ्जन र खानाको एक जटिल. यो वास्तवमा क्रिस्टल गिलास निर्माताका लागि डिजाइन गरिएको थियो, स्वारोभस्की.
फोहरा मानिसको टाउको जस्तो आकारको छ. यो युरोपको सबैभन्दा अनौंठो फव्वारा मध्ये एक हो, र निश्चित रूपमा एउटा भ्रमणको लायक जब तपाईं अस्ट्रियामा पैदल यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ.
कसरी पुग्ने स्वरोव्स्की फाउंटेन मा नाइस?
तिमी सक्छौ रेल द्वारा यात्रा एक घण्टा भन्दा कममा ईन्स्ब्रकबाट स्वारोभस्की सम्म.
म्युनिकदेखि इन्सब्रक ट्रेन मूल्यहरू
ईन्स्ब्रक ट्रेन मूल्यहरूमा साल्जबर्ग
इन्सब्रक ट्रेन मूल्यहरूमा ओबर्सडोर्फ
ईन्स्ब्रक ट्रेन मूल्यहरूमा ग्राज
7. जेनेट डेउ जेनेभामा
पानी जेट, अ in्ग्रेजीमा एक पानी जेट, युरोपको सब भन्दा अग्लो फव्वारा हो र पुग्न सक्दछ 400 मीटर. सुरुमा, फाउंटेन ला कुउलोभ्रेनिरेमा हाइड्रोलिक प्लान्टको अत्यधिक चाप नियन्त्रण गर्न निर्माण गरिएको थियो, तर चाँडै नै शक्तिको प्रतीक भयो.
त्यसैले, यो जेनेट Deau सम्झना गर्न गाह्रो छ जब तपाईं जेनेभा भ्रमण गर्नुहुन्छ. वास्तबमा, तपाईले जेनेभा तालमा आफ्नो बाटो भेट्टाउन सक्नुहुनेछ, यदि तपाईं केवल पानी जेट अनुसरण गर्नुहोस्.
जिओने ट्रेन मूल्यहरु लाईन
ज्यूरिखदेखि जेनेभा ट्रेन मूल्यहरू
पेरिस देखि जिनेभा ट्रेन मूल्यहरु
बर्न गर्न जेनेभा ट्रेन मूल्यहरु
8. स्ट्रभिंस्की फाउंटेन, पेरिस
सेन्टर पोम्पीडुमा स्ट्र्याभिन्स्की फव्वारा रूसी संगीतकारलाई म्यूजिकल ट्रिब्यूट हो, इगोर स्ट्रभिंस्की. उज्यालो रंगको ओठ, एक जोकर, र अन्य अपमानजनक शिल्पकलाले यस विलक्षण फव्वारालाई युरोपको सबैभन्दा अनौंठो फव्वारा मध्ये एक बनाउँदछ. डिजाइन मूर्तिकार जीन टिंगुली र चित्रकार निक डेन्ट फाल्ले बनाएको हो. दुबै कलाकारहरूको धेरै फरक शैलीहरू छन्: एकातिर दादावादी औद्योगिक, र अर्को तिर उज्यालो. त्यसैले, सँगै, तिनीहरूको कामले २० औं शताब्दीको उत्कृष्ट आधुनिक शास्त्रीय संगीतको उत्सव मनाउँछ.
निस्सन्देह, स्ट्रभिंस्की फव्वाराले तपाईंको ध्यान आकर्षण गर्दछ जब तपाईं यसलाई नजिक प्रशंसा गर्नुभयो. यो वास्तवमै विश्व प्रसिद्ध पोम्पीडु केन्द्रको प्रवेशद्वारमा सर्कस प्रदर्शन देखी जस्ता हो.
म कसरी पुग्ने स्ट्रभिंस्की फाउंटेन?
फोंटाइन स्ट्र्याभिन्स्की पोम्पीडो केन्द्रको प्रवेशद्वारमा छन्. तपाईं मेट्रोलाई होटल डि भिल स्टेशनमा लैजान सक्नुहुन्छ.
पेरिसदेखि मार्सिलेज ट्रेन मूल्यहरू
पेरिस ट्रेन मूल्यमा मार्सीलिज
मार्सेल्सले क्लरमन्ट फेरेन्ड ट्रेन मूल्यहरू
9. मार्गरेट टापु बुडापेस्टमा संगीत फवारा
हंगेरीको सबैभन्दा ठूलो फव्वाराले हरेक घण्टामा अद्भुत संगीत र लेजर शो प्रदर्शन गर्दछ. अक्टुबर सम्म, बुडापेस्टको मार्गरेट टापु भ्रमण गर्न उत्तम समय हो. तपाईं पिकनिकको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ जब तपाईं शानदार पानी र बत्तीहरू कार्यक्रम अवलोकन गर्नुहुन्छ.
Krizikova फव्वारा मध्ये एक बनाउने अर्को सुविधा 10 युरोप मा सबैभन्दा सुन्दर झरनाहरु, के त्यहाँ बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि एक संगीत कार्यक्रम हो.
म कसरी पुग्ने मार्गरेट टापु फाउंटेन?
तपाईं ट्राम द्वारा बुडापेस्ट शहर केन्द्रबाट मार्गरेट टापु फाउंटेन गर्न सक्नुहुन्छ.
भियनादेखि बुडापेस्ट ट्रेनको मूल्य
प्राग बुडापेस्ट ट्रेन मूल्यहरु
म्यूनिखदेखि बुडापेस्ट ट्रेन मूल्यहरू
ग्राज बुडापेस्ट ट्रेन मूल्यहरु
10. प्रागमा Krizik फाउंटेन
नाच फवारा, Krizik फव्वारा, प्रागको प्रदर्शनी केन्द्रको नजिक अवस्थित छ. बाट सुरू गर्दै 8 मध्यरात सम्म, तपाईं सबैभन्दा राम्रो बत्ती र सबै भन्दा राम्रो संगीत आनन्द लिन सक्नुहुनेछ. छन्4जब संगीत र लाइटमा प्रत्येक एक अर्का भन्दा पूर्ण भिन्न हुन्छ देखाउँदछ.
Krizik सांगीतिक फव्वार मा निर्माण भएको थियो 1891 प्रदर्शनी केन्द्र को लागी. त्यसबेलादेखि यो भीडको मनोरञ्जन हो. एक कार्यक्रमको साथ एक साँझ प्रागमा एक शानदार दिनको लागि एक उत्तम अन्त हुनेछ.
म कसरी पुग्छु क्रिजिक?
तपाई सजिलै Krizik फव्वारा मा ट्राम बाट स्टेशन Vystaviste गर्न सक्नुहुन्छ.
न्यूरेम्बर्ग प्राग ट्रेन मूल्यहरु
म्यूनिख प्राग ट्रेन मूल्यहरु
बर्लिन प्राग ट्रेन मूल्यहरु
भियना प्राग ट्रेन मूल्यहरु
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई युरोपमा कुनै पनि सुन्दर झरनाको लागि सस्तो ट्रेन टिकटहरू फेला पार्न मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं.
के तपाईं हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “युरोपमा १० अति सुन्दर फव्वारा"तपाइँको साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog १० اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो रेल मार्ग अवतरण पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्.
निम्न लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय ट्रेन मार्गहरू भेट्टाउनुहुनेछ - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- यो लिंक अंग्रेजी मार्गहरू अवतरण पृष्ठ लागि हो, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, र तपाईं tr लाई pl वा एनएल र तपाईंको छनौटको अधिक भाषाहरूमा बदल्न सक्नुहुन्छ.
ब्यूटीफाउन्ट्स यूरोप ट्राभेलिंग फोउन्टेन्स फाउन्टेन्सइन युरोप म्युजिकल फोउन्टेन रेल यात्रा
तपाईंको यात्रा को अधिकांश बनाउन
हल्याण्ड तुलिप सिजन कसरी रमाइलो गर्न
रेल यात्रा हल्याण्ड, यात्रा युरोप
5 सर्वश्रेष्ठ शहर युरोप मा धन्यवाद लागि भ्रमण गर्न
ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा नर्वे, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
शीर्ष3लन्डनबाट सर्वश्रेष्ठ ट्रेन यात्रा गन्तव्यहरू
10 युरोपमा आश्चर्यजनक स्टपहरू
10 संसारभरका सबैभन्दा सुन्दर गगनचुम्बी भवनहरू
10 संसारमा सबैभन्दा रंगीन ठाउँहरु
7 युरोप मा Pickpockets बाट बच्न को लागी सुझाव